Talooyin ku saabsan sida loo Download Music Online
> Resource > Music > Sida loo Download Music Online
Halkee iyo Sidee baan Download Karaa jecel Music Online?
Waxaa dhab ahaan ku xiran tahay sida aad u jeclaataan music. Iyaduna in la yidhaahdo, Dooni maayo inaan bixi karo, iyaga oo dhan ku ridin aan telefoonka gacanta iyada oo aan. Ama haddii kale, safar aan dhulka hoostiisa iyo dib u fiirinayaan shaqada noqon doonaa super caajis. In aan isku dayo oo haleesho on kasta iyo CD kasta ama ka iibsan ah kuwan raadkaygay gaar ah (iesingles) Waxaan jeclaan online isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, waxa kaliya oo aad u badan shaqo adag dooxeen ama koobi tareenka ka CD-yada si ay PC ka dibna waxa ay ku wareejinaya gal aaladaha kale ee aan qaadi karo.
Ka dib mararka qaar, waxaan dareensanahay inay jiraan hab fiican si dhab ah sameeyo. Waa jaban, si dhakhso ah oo sahlan. Isku day inaad soo Streaming Audio Recorder naftaada. Waxay leedahay shaqayn wanaagsan ii, laakiin sida aad ogtahay, aynu ku jirno oo dhan oo kala duwan! Isla mar ahaantaa, naftaada la sooro la infographic ku lifaaqan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Top 10 Best-Iibinta Warsame Qaasaali iyo kali ah ee 2013 iyo sidoo kale Top 10 Online Music dajinta Goobaha .
Sida laga soo xigtay " Music waa engine ah oo uu eraygii digital ", Maxaad samayn kartaa? Waxaa jira wax badan dabcan, ka lagala sida qaab MP4 ama MP3 file ah, isku ururiso playlist gaar, baadhidooda iyo dib u soo ceshano u lyrics, dib u soo ceshano info album iyo wax ka badan. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad si fudud u gubi kara playlist eee CD la dhisay-in gubi in Lugood. La mid ah dadka isticmaala Windows qaba gubi ka dhisay-in ku kumbiyuutarada ama laptops (taasi waxa ay caadiyan ku sameeyaa playlists aan).
Iyada oo ku xidhan sida aad u jeclaan doonaa si ay u helaan maktabadaha music aad, waa mid aad u sahlan hadda in xitaa ciyaaryahanka music baabuurta ee (naqshado cusub) la Timaadda booska USB ah! Haddii aad u rajeeyay in, si kastaba ha ahaatee, ku wareejin playlists ee offline madadaalada qalabka la qaadi karo aad, kaliya loo hubiyo qaab faylka waxaa lagu taageeray. Haddii kale, si fudud iyaga oo aad u bedeli karaan midkood ah online ama desktop Converter .
The Streaming Converter Audio sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u dejiyaan jadwaliye hawsha inay ka shaqeeyaan raallinimo kaa baryi. Haddii aadan haysan waa in la fadhiya ama haynta xaq hore ee aad PC. Si fudud waxa ay qarka u saaran inuu shaqada sidii wakhtigii ama waxa aad waydiisaa in ay hoos u xidhay ka dib markii si buuxda u dhameeyo. Ka dib markii download ah, waxa aad helaysaa fursad u shakhsiyeeyo iyo edit raadkaagu, ka iyaga tagging inay darajo ku sifayn iyo wax ka badan. Waa daacad ah habka aad u fudud oo toos ah, ' waxa aad maqli waa waxa aad u hesho! '